Isiteyidiyo esiphakamileyo esinombono omangalisayo - I-Airbnb
Isiteyidiyo esiphakamileyo esinombono omangalisayo
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguFrancine
Mhlawumbi umbono obalaseleyo kwindawo. Ngaba ujonge uxolo kunye nokuphumla kunye nothando lwabucala? Mhlawumbi ukhetha ukukhwela ibhayisekile okanye ukukhwela intaba? Embindini wendalo kwaye ungafikelela kumaziko eLucerne, Zurich, Basel kunye neBern kwimizuzu engama-20-50. Indlu ibanzi, inefenitshala emnandi kwaye inika indawo yabantu aba-4. I-balcony yeyamagumbi kwaye isetyenziselwa kuphela. Ikhitshi enefriji, i-oveni, isitovu kunye nomenzi wekofu, iTV yesathelayithi, iWiFi kunye nePP.
Kwiflethi okanye indlu ekwicomplex enefenitshala eyi-40 kukho ibhedi elala abantu ababini eyi-180cm kunye nesofa ekwayibhedi eyi-1/190cm. Indawo yokuphumla ekwibhalkoni enamagumbi aliqela ikumema ukuba wonwabele indawo entle. Kwiofisi yasekhaya kukho unxibelelwano ngqo lwe-LAN kwindawo yokuhlala.
Ifama yase-Aengelberg iphezu kwelali yase-Egolzwil kumda wehlathi. Iwayini eziphuma kwisidiliya sefama zenza isidlo ngasinye sibe sisidlo. Ukuba awuziva ufuna ukupheka ngokwakho, ungakonwabela ukutya okugqwesileyo kwiindawo zokutyela e-Egolzwil naseWauwil. Ungafumana yonke into oyifunayo kwiimfuno zakho zemihla ngemihla eWauwil. Ungafumana yonke enye into eSursee, 10km kude.
Umbuki zindwendwe ngu- Francine
Isitshixo siya kufakwa xa umninimzi engekho.